Umthandazo weeNkundla zethu kunye nabaGwebi (ngabaPhristi beBomi)
EUnited States, ukuqinisekiswa kokukhipha isisu kuzwelonke kungekhona ngokusetyenziswa kwezomthetho kodwa ngokugweba inkundla, ngokukodwa kwimeko yeNkundla ePhakamileyo yase-US uRoe v. Wade . Lo mthandazo, obhaliweyo ngabaPristi boBomi, enye yezona zinto ziyingcali eziphezulu zeKatolika, zifuna ubulumko kubagwebi bethu kunye nabapolitiki abakhethileyo, ukuze bonke ubomi obungakazalwa bukhuseleke.
Nkosi uThixo, ndiyanibulela namhlanje ngesipho sesizwe sethu.
Wena wedwa ulawula umhlaba ngokusemthethweni,
Nangona kunjalo ubeka ezandleni zethu umsebenzi onesidima
lokuthatha inxaxheba ekubunjweni kukaRhulumente wethu.
Ndiyathandaza namhlanje kuMongameli kunye namaSenethi
Ngubani ophethe uxanduva lokubeka abagwebi kwiinkundla zethu.
Nceda ukhusele le nkqubo kuyo yonke ingxaki.
Nceda usithumelele amadoda namabhinqa obulumko,
Ngubani ohlonipha umthetho wakho woBomi.
Nceda usithumele abagwebi ngokuthobeka,
Ngubani ofuna iInyaniso yakho kungekhona imibono yakhe.
Nkosi, sinike sonke isibindi esinesidingo sokwenza okulungileyo
Kwaye ukukhonza wena, uMgwebi wabo bonke, ngokunyaniseka.
Siyabuza ngoKristu wethu iNkosi. Amen!
Inkcazo yabaPristi kwiNkundla yoBomi kwiNkundla zethu kunye nabagwebi
Igunya lonke, kuquka negunya likarhulumente, livela kuThixo. Kodwa abo ba lawulayo abahlali basebenzisa loo gunya ngeendlela zokuphucula ubulungisa. Bobabini iinkokheli zethu ezikhethiweyo kunye nabagwebi bethu abamiselweyo bafuna ubulumko kunye nokhokelo lukaThixo lokusebenzisa igunya labo ngokufanelekileyo.
Njengezakhamuzi, sinembopheleleko ekungabandakanyeki kuphela kurhulumente wethu, kodwa ukuthandazela abo sikhethiweyo ukusikhokela kuzo zonke iinkalo zikaRhulumente. UMongameli we-United States ukhetha abaviwa kubagwebi bamazwe kunye nezigwebo zeNkundla ePhakamileyo yase-United States, kwaye amalungu e-Senate yase-United States avumile abo baviwa. Sithandazela ukuba sikhethe iinkokeli zethu ngokuhlakanipha, kwaye zikhetha abagwebi bethu ngokuhlakanipha, ukuze abo bajaji benze ngokuchanekileyo nangobulumko.
Iinkcazo zamagama ezisetyenziswe kumthandazo weNkundla zethu kunye nabagwebi
Umsebenzi: uxanduva okanye uxanduva; Kule meko, iimbopheleleko zethu njengabemi, "ngokubanzi kunokwenzeka," ukuba "athathe inxaxheba ebomini ebomini," njengoko kuchazwe kwiCatechism yeCawa yamaKatolika (umhlathi we-1915)
Ukuvalwa: into ekhusela inkqubela ethile into entle; Kule meko, imithintelo ekuqeshweni kwabagwebi abazizilumko nabagwebi
Ubulumko: isigwebo esihle kunye nokukwazi ukusebenzisa ulwazi kunye namava ngendlela efanelekileyo; Kule meko, ubuhle bemvelo kunokuba kuqala kweziphi izixhenxe zoMoya oyiNgcwele
Ukuthobeka: ukuthozama ngokuzenzekelayo; Kule meko, ukuqaphela ukuba izimvo zakho zingabalulekanga ngakumbi kunenyaniso
Iingcamango: iinkolelo zomntu malunga nento ethile, nokuba yinyaniso okanye ayikho
Umthandazo kuSint James umPostile
Usuku lweSikhumbuzo Imithandazo
Thandaza Umthandazo Wokusindiswa
Imfazwe ye-Little Round Round e-Gettysburg
Indlela yokudibanisa "Omkhulu" (ukukhula)
Amandla kunye noKhuselo
10 Imiboniselo yeHlathi yeHlabathi yokuHlala kweMbala e-US naseCanada
Indlela iMaai yeSiqithi se-Easter yenziwe ngayo kwaye yahanjiswa